Taliyaha Sirdoonka Israel ee Mossadka oo ku wajahan Imaaraatka Carabta iyo Ujeedka Safarkiisa | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Taliyaha Sirdoonka Israel ee Mossadka oo ku wajahan Imaaraatka Carabta iyo Ujeedka...
Taliyaha Sirdoonka Israel ee Mossadka oo ku wajahan Imaaraatka Carabta iyo Ujeedka Safarkiisa
Warbixino Isrsel naga soo gaarayo ayaa lagu sheegay in madaxa sirdoonka Israel ee “Mossad” Yossi Cohen, uu u safri doono maalinta Axada magaalada Abu Dhabi, halkaas oo uu kula kulmi doono dhaxal sugaha Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed.
Hey’ada Warbaahinta Israel ee “Makan” ayaa sheegtay in booqashadan ay timid iyada oo ujeeddadu tahay “dhammaystirka heshiiskii nabadeed” ee labada dhinac iyo qabanqaabada xafladda saxiixa heshiiska.
Makan oo soo xiganeyso ilo rasmi ah oo laga soo xigtay Emiratka ayaa sheegtay in labada waddan ay ku tala jiraan inay safaaradooda midba midka kale kala furtaan ka dib markii la saxiixay heshiiska nabada, iyada oo la tixgalinayo talaabadan “astaanta midnimada.”
Isha warka laga helay ayaa sidoo kale tilmaamtay in Imaaraadku, sida muuqata aanu safaaraddiisa ka furi doonin Magaalada Qudus.
Dhanka kale, warbixinada la helaayo ayaa sheegaya in xafladda saxiixa heshiiska nabadeed ee u dhexeysa Israel iyo UAE ay dhici doonto horaanta bisha Sebtember ee soo socota taasoo ka dhici doonto Aqalka Cad.
Israel, Imaaraadka iyo Mareykanka ayaa si rasmi ah u shaaciyey in heshiis caadi ah gaadheen Talaabiib iyo Abu Dhabi Khamiistii lasoo dhaafay kaasoo ay xiriir ku yeelanayaan xili Imaaraatka noqday dalkii ugu horeeyay Khaliijka ka socda oo xiriir noocaan ah la yeesha Israel sidoo kalana shaaciya.